Dhacdo ugub ah: UNE oo nin u dhashay Poland siisay magangalyo qoxootinimo - NorSom News
Dhacdo ugub ah: UNE oo nin u dhashay Poland siisay magangalyo qoxootinimo
Nin u dhashay dalka Poland oo kamid ah dalalka midowga Yurub, ayaa dalkan Norway ka helay managalyo qoxootinimo. Waxeyna noqoneysaa dhacdo ay nooceeda oo kale ay ku cusubtahay Norway, maadaama inta badan dadka la siiyo magangalyada qoxootiga ay yihiin dad kasoo jeedo dalalka ay ka socdaan colaadaha ama ay ka taliyaan maamulada kali-taliska ah.
Rafa Gawel oo ah ninka Poland u dhashay oo ay Norway qoxootinimada siisay ayaa dalkiisa ka ahaa qof u dhaq-dhaqaada arrimaha xuquuqda bini-aadamka, wuxuuna bishii January ee sanadkan yimid Norway, isaga oo wato xaaskiisa iyo ilmihiisa, raadinaya magangalyo qoxootinimo. Isaga oo sheegay in lagu sameeyay takoor iyo dabagal ay ku kala kacday xukuumada ka talisa dalkiisa.
Hey´adda qoxootiga ayaa isla markiiba siisay diidmo ku saabsan codsigiisa magangalyada, balse wuxuu racfaan ka qaatay go´aanka UDI-da, isaga oo u diray hey´adda ka sareyso ee UNE.
Hey´adda UNE ayaa dib u qiimeyn kadib sheegtay in ninkaas uu u qalmo in la siiyo magangalyo, waxeyna ogolaatay in magangalyo qoxootinimo la siiyo.
Marianne Granlund oo katirsan hey´adda UNE ayaa sheegtay in naadir iyo dhif ay tahay in qof u dhashay dal Yurub la siiyo magangalyo qoxootinimo, balse markii la qiimeeyay cadeymaha uu ninkan soo bandhigay oo adkaa kadib, la siiyay magangalayda.
Norway ayaa ogolaatay in ninkan la siiyo hal sano oo magangalyo kumeel gaar ah, kadibna magangalyadiisa lagu sameeyo dib u cusbooneysiin, hadii uu mar kale soo codsado in loo cusbooneysiiyo magangalyada.
Xigasho/kilde: Hevder seg forfulgt av polske myndigheter: Fikk politisk asyl i Norge.
Previous articleLabo dumar soomaali ah: Qaniinyo ayay farta kaga goysay: Sanad xabsi ah iyo magdhow ayaa lagu xukumay.
Next articleDaawo: Aragtida labada guruub ee go´aankii gobolka Oslo ee masaajidka Tawfiiq